Kutengesa kweyakagadziriswa Infiniti QX80 yakavhurwa muRussia | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Iyo dheshibhodhi yeiyo restyled vhezheni yakagashira 7-inch kuratidza, 2 skrini ine diagonal ye7 uye 8 inches yakaonekwa pane iyo yepakati koni panguva imwe chete. Iyo yekumusoro kuratidzira inodzora iyo yekufambisa system uye Android Auto mashandiro, nepo yakaderera kuratidza inodzora odhiyo system uye mamiriro ekunze kudzora.
Iyo Infiniti QX80 ine yazvino Bluetooth 4.1 module uye yepamusoro izwi rairo yekuziva system inogona kuita inosvika zviuru zvitanhatu zvemirairo yezwi.
Midziyo yakajairwa yeSUV inosanganisira yeganda upholstery, 22-inch mavhiri, akapatsanurwa echipiri-mutsara zvigaro, 3-zone ekudzora mamiriro ekunze uye adaptive musoro optics.
Iyo Infiniti QX80 yakagamuchira isingaoni nzvimbo yekudzora basa, inoshanda cruise control, yekumberi kudhumhana kunzvenga system uye mubatsiri anokuzivisa iwe nezvekusiya nzira inogarwa.
Infiniti QX80 - kuongorora kwevhidhiyo
Posted in Kusarudza motokari, motokari
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,403 masekondi.